Samuel Eto’o Oo Ka Tegaya Sampdoria Kadib Khilaaf Dhex Maray Tabaraha
HomeWararka MaantaSamuel Eto’o Oo Ka Tegaya Sampdoria Kadib Khilaaf Dhex Maray Tabaraha
Samuel Eto’o ayaa isku diyaarinaya in aanu shandaddiisaba furin ee uu sida ay u xidhan tahay ku qaato kadiab markii uu khilaaf soo kala dhex galay tababaraha Sampdoria oo uu toddobaadkii hore uun ku biiray isaga oo ka soo wareegay naadiga Everton ee wadanka Ingiriiska.
Xiddigan hore ee Cameroon ayaa waxa ay isku dhaceen tababare Sinisa Mihajlovic kadib markii uu Eto’o diiday in uu ka qayb galo tababar dheeraad ah oo uu macallinka kooxdaasi amray in ay ciyaartooyadaasi sameeyaan, taas oo uu tababaruhu kaga jawaabayay guul darradii 5-1 ay kooxdiisa ku garaacday Torino. Eto’o ayaa ciyaartaas oo ahayd tii ugu horreysay ee uu u safto Sampdoria waxa uu beddel ku soo galay daqiiqaddii 71aad, waxase uu garoonka kala baxay guul darro.
Eto’o ayaa markaa kadib isaga tegay garoonka tababarka waxaanu dib ugu laabtay magaalada Milan oo ay reerkiisu degan yihiin isaga oo gaashaanka ku dhuftay in uu u hoggaansamo amarka tababaraha.
Maamulka naadiga Sampdoria ayaa la sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka baxaan heshiiska ay toddobaadkii hore la galeen Samuel Eto’o oo hore ugu soo ciyaaray Inter Milan, Barcelona, Chelsea, Real Madrid iyo kooxo kale.
Saraakiil ka tirsan Sampdoria oo ay warbaahintu wax ka weydiisay xurgufta tababaraha iyo Eto’o ayaa ka gaabsaday, hase yeeshee Muhajlovic ayaa isagu u tibaaxay warbaahinta in si mushkiladda loo xalliyo ay habboon tahay in la eryo Eto’o.
“Si mushkiladda loo xalliyo, waxa loo baahan yahay laba qof, waa in uu iska tago Eto’o, wax kasta isaga ayaa sameeyey.
“Hadda waabu tegay. Waxa uu u sheegay kooxda in aanu wax xushmad ah u hayniin aniga iyo kooxda oo dhanba. Laakiinse ma ogi waxa ay kooxdu ka yeelayso” sidaa waxa uu Mihajlovic u sheegay Mediaset.
Taageerayaasha Kooxda New York Red Bulls Oo Ku Jees-jeesay Pirlo iyo Lampard